Maitiro ekumisikidza iyo AirDrop basa mune iOS 11 pane iyo iPhone uye iPad | IPhone nhau
Iyo huru yekufungidzira iyo yegumi neimwe vhezheni yeIOS 11 inotipa, tinoiwana mune aesthetics, kunyangwe zvichienderana nezvikamu zvipi zvakanyanya kana zvishoma kuoneka. Iyo yekudzora nzvimbo yanga iri imwe yezvinhu izvo kugadziriswazve kunoonekwa zvakanyanya, nekuti haina kutaridzika zvachose senge shanduro dzekare. Ne iOS 11 kwete chete inoshandura zvizere iyo aesthetics, asi isu tinogona zvakare kugadzirisa huwandu hwezvinhu zvinoonekwa. Nekutadza, sarudzo imwechete dzinoonekwa dzataigona kuona mushanduro dzakapfuura, kunze kweye AirDrop basa, iro rakanaka basa iro inotibvumidza kutumira mafaera kubva kuMac kuenda ku iPhone kana iPad uye zvinopesana kana kubva ku iPhone kana iPad kune imwe iPhone kana iPad nekukurumidza.
Kana iwe uchigara uchishandisa basa iri, pazasi tinokuratidza maitiro aungaita ese ari maviri kubva kunzvimbo yekudzora pamwe nekubva kune marongero eIOS.
1 Shandisa AirDrop kubva kuControl Center
2 Shandisa AirDrop kubva kuIOS 11 marongero
Shandisa AirDrop kubva kuControl Center
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa pinda iyo Control Center inotsvedza chigunwe chako kubva pasi kumusoro kuchidzitiro.
Tevere tichaona matafura akati wandei uko sarudzo dzakasiyana dzaanotipa dzakarongedzwa. Tinofanira tinya pakati pebhokisi uye bata pasi iko iko Wi-Fi, kubatana kweBluetooth kuri… kuitira kuti pikicha hombe iratidzwe panowanikwa sarudzo dzese dzekubatanidza dzainopa.
Zvino isu tinongofanira kudaro enda kune iyo AirDrop basa uye wobva wadzvanya. Muhwindo rinotevera rinowoneka, tinofanirwa kusarudza kuti tinoda here kumisikidza chiitiko chevose kana cheavo chete vekutaurirana avo vakanyoreswa mudariro redu.
Shandisa AirDrop kubva kuIOS 11 marongero
Mukati mezvirongwa tinya pa General> AirDrop uye isu tinosarudza watinoda kushandisa naye basa iri, nevashandisi vese vakatikomberedza kana nevashandisi chete vakanyoreswa mune yedu yemazita mazita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Maitiro ekumisikidza iyo AirDrop basa mune iOS 11 pane iyo iPhone uye iPad
Efren Silva akadaro
Inotaura maitiro ekumisikidza asi kwete maitiro ekumisikidza zvachose mune yemodhi.
Pindura kuna Efrén asilva
HDR tekinoroji inouya kune inonzi Apple TV 4K
Iyo nyowani iPhone 8 uye iPhone X inochengeta iyo RAM yazvino iPhone 7